सिसिएमसीले काम गर्न सकेन, अब मन्त्रालयले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्छ – डा. जागेश्वर गौतम – Health Post Nepal
सिसिएमसीले काम गर्न सकेन, अब मन्त्रालयले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्छ – डा. जागेश्वर गौतम
२०७८ वैशाख ३१ गते १६:५०
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अक्सिजन वितरणमा समस्या आएको भन्दै वितरणको काम पनि आफै गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार अस्पताललाई अक्सिजनको सहजीकरण व्यवस्थापन मन्त्रालयले नै गर्नेछ।
यसअघि कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र(सिसिएमसी)ले गर्दै आएको थियो।
‘उहाँहरूलाई अस्पतालको बारेमा धेरै ज्ञान भएन। उद्योगको कुरा थाहा होला,’ डा. गौतमले भने, ‘अस्पतालको बेडमा कति आइसियू, भेन्टिलेटरमा बिरामी छन्। कतिले अक्सिजिन पाएका छन् भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। उहाँहरूले गछौं भनेपछि हामीले हुँदैन भन्ने कुरा भएन। तर, अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन। अब हामी अक्सिजनको राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न तर्फ लाग्छौं।’
हेल्थपोस्टसँग उनले बताएअनुसार थप अक्सिजन उत्पादनका लागि उद्याोगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, बिग्रिएका उद्योगलाई बनाउने तथा थोरै समय चल्ने उद्योगलाई धेरै समय चलाउने जस्ता काम अब मन्त्रालयकै समन्वयमा हुनेछ।
‘जुन—जुन अस्पतालले अक्सिजनको सम्झौता गरेका छन् तिनै कम्पनीबाट लिइन्छ। तर, कति लिने भन्ने कुरा मन्त्रालयले निर्धारण गर्छ,’ उनले भने।
सिसीएमसीले कोटा प्रणाली अनुसार अक्सिजन वितरणको समन्वय गर्दै आएको थियो। तर धेरै अस्पतालले कोटा अनुसार अक्सिजन सिलिण्डर नपाएको गुनासो गरेका थिए।
५–१० बेडका अस्पतालले अक्सिजनका बिरामी राख्न थालेको अवस्थामा अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनको भनाई छ।
‘अक्सिजन चाहिने बिरामीलाई सुविधा भएको ठुलो अस्पतालमा पठाउनुपर्यो,’ उनले भने्, ‘स–सना अस्पतालले आइसोलेसनको काम गनुपर्यो। धेरै ठाउँमा बाँड्दा अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भयो।’
उनका अनुसार कुन अस्पतालले कति अक्सिजन पाउने भन्ने निर्धारण बिरामीको संख्यामा गरिनेछ।
मन्त्रालयले अक्सिजन वितरणको सहजिकरण गर्नका लागि टिम (क) र टिम (ख) गरेर दुई वटा टिम गठन गरेको छ। जस अनुसार टिम (क) मा प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. प्रकासप्रसाद शाह र उप–सचिव महेश पाण्डे रहेका छन्। यसैगरी टिम (ख) मा प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रोशन न्यौपाने र उपसचिव सानुबाबु अधिकारी रहेका छन्।
अब यी दुई टोलिले नै अक्सिजन वितरणको समन्वय गर्नेछन्।
मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई अक्सिजन व्यवस्थापनलाई सहजिकरण गर्न चौबिसैं घण्टा उपलब्ध हुने गरी ९८५१३१०५८१ र ९८५१३१०५८४ मा सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ।
साथै [email protected] मा पनि सम्पर्क गर्न सकिने बताइएको छ।